Olee otú ị na Tinye sere iTunes?
Na-gị iTunes songs efu ụfọdụ artwork? Ee, ọ bụ omume na-azụ efu artwork gị iTunes. Ọzọ, ọ bụ mgbe mfe.
Ịgbanwe osise Iji aka
Ị maara otú iji weghachite album artwork? Ọfọn, ọtụtụ ndị ga-asị na iTunes nwere ike ime ọrụ nke ịchọta album artwork. Ee, ọ nwere ike na-arụ ọrụ ụfọdụ nke ugboro ma gaghị arụ ọrụ oge niile. Ekele, e nwere ụzọ ịgbanwe artwork aka ma ọ bụrụ na ị na-emeso ọtụtụ narị album mgbe ahụ ị na-agaghị achọ oge gị n'iyi.
Gịnị mere o ji dị mkpa ịgbanwe artwork?
Ọtụtụ ọrụ ọma na-eji a usoro ebe ị họrọ album na-eji nhọrọ nke Get Album osise si iTunes. Nke a yiri a n'ụzọ kwụ ọtọ usoro, ma ị gaghị enwe obi ụtọ na N'ihi. Ka anyị na-ahụ ihe mere nke a usoro adịghị arụ ọrụ dị ka anyị na-atụ anya.
1. mbụ, iTunes ga iṅomi album nkà dabeere kenha ihe metụtara faịlụ dị ka aha, album, ma ọ bụ na-ese. Nke a bụ ihe kasị adighi ike ụzọ ahụ dị ka ndị ọzọ song nwere ike yiri ha okwu aha ma ọ bụ album. N'ihi ya, e nza nke artwork na software ga-aga site. Accuracy ga-ịghọta.
2. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya onye na-ese, e nwere n'aka na-a ọnụ ọgụgụ nke songs site ya. Ọtụtụ mgbe, iTunes ahọrọ onye na-ese artwork maka album, na mgbe ụfọdụ a nwere ike ghara ịbụ ọbụna distantly metụtara gị album.
3. Ọ bụrụ na ọ dịghị ọmụma ma ọ bụ ọbụna na mkpado, mgbe ahụ, iTunes ghara laghachi ọ bụla artwork metụtara album ma ọ bụ faịlụ.
4. Ọ bụrụ na artwork dị na saịtị ebe nzere na-achọrọ, iTunes ghara ike iji weghachite na artwork.
5. Albums na yiri aha na mkpado ike ejedebe na yiri artwork, nke ga-ike echiche nke oyiri faịlụ gị iTunes.
N'ihi ya, n'elu usoro bụghị a viable nhọrọ maka ịchọta artwork. Eleghị anya-eji nke a n'ihi na otu onye ma ọ bụ abụọ album ọnụ ma ọ bụghị n'ihi na ọtụtụ albums. Ka anyị na-ama mara aka na-agbakwunye artwork ka onye ọ bụla faịlụ na album bụ na-ewe oge, ọ bụkwa bụghị oké nhọrọ.
WonderShare TunesGo bụ otu oké software raara nye ịchọta efu album ekpuchi ka albums. Ọ bụ otu n'ime ndị adịchaghị software site ebube ebe a. Otú ọ dị, ọ bụ ihe tinye-na na na-achọ iTunes na-agba ọsọ a software. Ọ bụ multifeatured software.
Atụmatụ nke TunesGo
- Ị nwere ike nyefee music site na ndị ọzọ iOS ngwaọrụ. N'ihi ya, ị nwere ike imelite gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na kọmputa na ala.
- I nwekwara ike mekọrịta Android na iTunes, nke bụ ga ugbu a ụbọchị na ụba ojiji nke Android ngwaọrụ.
- Ị nwere ike ibudata ma ọ bụ ụlọ ahịa music si YouTube na ndị ọzọ na gụgharia saịtị. Ọ bụ otu nke Kacha atụmatụ.
- Hichaa gị dum Music Library ebe i nwere ike ịgbakwunye efu mkpado, album-ekpuchi ma na deletes oyiri faịlụ. A nile na-eme na ole na ole clicks.
- Ị nwere ike iji aka nyefee music si iTunes ngwaọrụ gị na dị nnọọ Dọrọ na dobe atụmatụ.
- Ị nwere ike ịkọrọ gị playlist na onye ọ bụla na mfe otu Pịa. Ịnwere ike ibudata a software si Wondershare. Otú ọ dị, ị ga-enwe ịzụta zuru version iji ya maka agbakwunye artwork gị albums.
Agbakwunye album cover
Na-esonụ bụ usoro otú ị nwere ike iji ya ka ịgbakwunye album cover:
1. Ozugbo i ebudatara software, wụnye ya ma ị ga-enwe iTunes na gị Mac. Ọ bụghị naanị arụnyere ma, ọ ga synchronized. Nke a ka a chọrọ ka ị na-achọ album na-na iTunes n'ọbá akwụkwọ.
2. Ugbu a ẹkedori TunesGo. Na ala nri nke window, ị ga-achọta nhọrọ, Hichaa iTunes Library. Dị pịa na ya, na a Doppler ga-amalite na-efu mkpado, efu album artwork, efu iTunes egwu na oyiri songs. Ọ na-ewe nanị minit ole na ole na mgbe ahụ ị ọma na-aga.
3. Ọzọ, họrọ ihe ị chọrọ ime. N'ihi ga-egosi otú ọtụtụ tracks na-efu mkpuchite. Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị 10, ị ga-achọ zuru version nke software dị ka ikpe mbipute ókè ị na-na 10 mkpuchite.
4. Jide n'aka na n'Ụzọ na-efu mkpuchi na-ticked anya tupu ị pịa Clean Up. Ọzọ popup ga-egosi na gị na ihuenyo arịọ maka nkwenye. Dị nnọọ pịa Clean Up.
5. Ugbu a ị na-eme! The software ga-akpaghị aka ịgbakwunye artwork na-efu tracks. Ị pụrụ ịhụ artwork na tracks na iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Usoro a bụ ihe ezi karịa iTunes Nweta osise nhọrọ. Nke a bụ n'ihi na e nwere raara onwe ya nye software mepụtara dị nnọọ maka nzube nke na-agbakwunye efu entities dị ka na mkpado ma cover gị tracks. Ke adianade do, ọ ga-ihichapụ oyiri songs-azọpụtakwa unu dị oké ọnụ ahịa ohere.
Ị ka pụrụ iji nkịtị usoro nke na-agbakwunye artwork aka ma ọ bụ na-eji iTunes nhọrọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọ ka ịgbakwunye ọtụtụ nkà na-ekpuchi ka narị ma ọ bụ puku, nke a nwere ike ghara ịbụ-ezi ezi ma na-ewe. N'elu usoro ga-eme ọrụ ahụ na ole na ole clicks, na ọ bụ ndị ọzọ dị ike karịa iTunes na okwu nke ịchọta efu artwork. Lelee Wondershare website maka nkọwa ndị ọzọ na nkwado.
> Resource> iTunes> Olee otú ị tinye sere iTunes